Ka ilaalinta qoraxda iyo cawaaqibta - sida loo ilaaliyo naftayda
Ka ilaalinta qoraxdu iyo cawaaqibkeeda
Markaad noqoto makhaayad
Xagaaga waa wakhti fasax oo fursad weyn in ay sameeyaan wax kasta oo furan. Waaweyn iyo kuwo yaryar waxa gudaheedana sinaba uma ay illowdo waa in xoqin la qoraxda ku filan. Laakiin sababta ilaalinta ka dhanka ah gubto si muhiim ah, sababta ay lagama maarmaan tahay in ay maqaarka ka qorax aad u badan loo ilaaliyo iyo sida ugu fiican inaan halkaan sii wadi?
La'aanta ilaalinta qorraxda iyo cawaaqibkeeda
Shucaaca UV-ku wuxuu ku jiraa iftiinka qorraxda waxay dhaawaceysaa maqaarka markasta oo uu soo gaadhay muddo dheer. Waxyaabaha kale, tani waxay keeni kartaa sunburns xanuun, taas oo maqaarka ku noqonayaa mid aad u xasaasi ah cadaadiska.
Ka ilaalinta qoraxda
Sidoo kale falcelinta xasaasiyadeed waa suurtagal.
Sunburns ayaa si gaar ah halis u ah, laakiin gaar ahaan sababtoo ah waxay sababi karaan dhaawac muddo dheer ah, sida kansarka maqaarka.
Fasaxa, dabcan waa mid si sahlan u fudud in la helo qorax guban, sababtoo ah inta badan si fudud ayaa loola jilicsanaa habka.
Intaa waxaa dheer, marar badan ayaa illoobi karta in ay suurtagal tahay helitaanka qoraxda xitaa iftiinka daruuraha ama hooska qayb ahaan. Tallaabooyinka ilaalinta joogtada ahi waa mid aan loo baahnayn markaad u safraysid wadamada diiran. Hab fudud oo aad naftaada uga ilaalin karto qorraxda waa inaad xirto dharka aadka u xidhan.
Ilaalinta qorraxda waa muhiim
Sababtoo ah tani marwalba ma fiicna heerkulka kulka, waa inay noqotaa mid nalalka iyo hawada u suurtogal ah. Tani ma dhihin dhidid markaad guurto. Koofiyadaha qorraxda ayaa sidoo kale qayb ka ah gardarrada ama sida beddelka parasol.
Qorsheyneysa kaliya salsaarasho, joog maydhashada ama Jeexitaanka, waa mid ku tiirsan yihiin qoraxda a in uu leeyahay arrin iska ilaalinta qoraxda sare. mid ka mid ah waa in sidoo kale marna muraayadaha in buuxa ama wax yar oo dhar, illoobay, si ay indhaha difaac ka shucaaca xad-dhaaf ah. Fiirsada kuwaas sharciyo fudud, ka dibna: Hadda waxa awoodo ka go fasax!
Haddii maqaarku casaan yahay sida lakabyo la kariyey, waxaad ogtahay inaad qorraxda aad u dheerayd. Haddaba maxaad samayn kartaa haddii uu kuugu dhuftey mar iyo maqaarku waa gubasho iyo cuncun? Kareemada iyo kareemada ayaa nuugaya oo caawiya maqaarka soo kabsashada.
Sunburn wuxuu xaddidaa farxadda fasaxa
Badanaa, alaabooyin ay ku jiraan bareega aloe ama chamomile ayaa lagula talinayaa. Taas oo ka caawisa sida ugu fiican, waxay sidoo kale ku xiran tahay nooca maqaarka, taas oo ah sababta ay faa'iido u yeelan karto kiriimyada badan ee kala duwan. Waxa sidoo kale ku haboon xanuunka xanuunku, waa baqshado qabow ama dabaasha. Intaa waxaa dheer, waa inaad cabtaa wax badan si aad u yareyso maqaarka culus.
Qodobbada qorraxda iyo dhexdhexaadka ah, waxaa lagula talinayaa in laga helo dawooyinka ka hortagga bararka. Dhibaatooyinka guriga ayaa guud ahaan lagula taliyaa kaliya xaddidan. Waxaa badanaa lagula taliyaa in lagu xoqdo Quark meelaha ay dhibaatadu saameysey inta lagu jiro qoraxdu.
Inkasta oo inta badan qaboobo aad u wacan yahay, laakiin sidoo kale keeni kartaa infekshan ama dareen diidmo oo xasaasiyadeed, taas oo kaliya yhay xaalada sababtoo ah bakteeriyada la joogo.
Qalabka qurxinta dabiiciga ah - ka ilaalinta qorraxda
Xad-gudubka Galmada - Ilaalinta iyo Calaamadaha | waxbarashada
Cabbiraadda Rootiga Page - Selfie ee muraayada horteeda
Maaddooyinka dabiiciga ah ee dabiiciga ah - sida ay uga ilaaliso da'da
Maxay tahay sababta aan uhogal uga dhignay xaasid - su'aasha ilmaha
Dhibaatooyinka - Ka hor gudba madaxaaga
Riddles, aqoon iyo su'aalo loogu talagalay carruurta, dhallinyarada iyo dadka waaweyn
Jirro jiilaalka - maxaa sabab u ah?